ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၌ ဗီဇပြောင်း အိုမီခရွန် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအသစ် တွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
INTERNATIONAL ORGANIZATION International Organizations မြန်မာ-中文
အမေရိကန်စစ်တပ်က ဗိုင်းရပ်စ်များ သယ်ဆောင်လာသည့်အတွက် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက အချက်အလက်များ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာထုတ်ပြန်ပေးရန် တောင်းဆို
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ လှူဒါန်းမှုအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြု
အိုမီခရွန်ကို ကာကွယ်ရန် အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးကြရန် တရုတ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တိုက်တွန်း
လက်ရှိကာကွယ်ဆေး၏ အားဖြည့်ကာကွယ်ဆေးများက လုံလောက်အုံးမည်မဟုတ်ကြောင်း WHO ပြော
လက်ရှိနှုန်းအတိုင်း ဆက်ပြန့်နှံ့နေပါက လာမည့် ၆ ပတ်မှ ၈ ပတ်အတွင်း အိုမီခရွန်မျိုးဗီဇပြောင်းနှင့်အတူ ဥရောပတိုက် လူဦးရေ ထက်ဝက်ကျော် ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့မှုအတွက် အမေရိကန်တွင် တာဝန်ရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်း သုတေသနအစီရင်ခံစာက ဖော်ပြ
အိုမီခရွန် ကူးစက်မှုက အမေရိကန်တွင် ယနေ့အထိ သာမန်အားဖြင့် ပျော့ပြောင်းသည့်ရောဂါလက္ခဏာများကို တွေ့ရှိရကြောင်း CDC ပြောကြား
လစ္စဘွန်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၌ COVID-19 ဗီဇပြောင်း အိုမီခရွန် (Omicron) ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုအား ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယင်း ဗီဇပြောင်း အိုမီခရွန် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသည့်လူနာအား နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် တွေ့ရှိအတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ယင်းလူနာသည် အားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တောင်အာဖရိကမှ ပြန်လာပြီးနောက် ၎င်းသည် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရသူ ၁၃ ဦးရှိခဲ့သည့် Belenenses SAD ဘောလုံးအသင်း ၏တာဝန်ရှိသူများနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်း၊ လစ္စဘွန်းမြို့၊ မြို့ပြဒေသရှိ Garcia de Orta ဆေးရုံ ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Luis Amaro ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ဆေးရုံက ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများကို ကုသပေးသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ အန္တရာယ်ရှိသော လူနာများနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးသူများကြားတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အဆက်အသွယ်ကွင်းဆက်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားကတည်းက အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁,၁၄၇,၂၄၉ ဦး ၊ သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၁၈,၄၄၁ ဦး ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ သိရသည်။ (Xinhua)
Portugal detects new case of Omicron variant
LISBON, Nov. 30 (Xinhua) — Portugal registeredanew case of the COVID-19 Omicron variant on Tuesday, which has been linked withafootball team where the country’s first batch of infections with the new variant were detected.
The patient had contact with the personnel of the Belenenses SAD football club, which had already identified 13 infected people after an athlete returned from South Africa, according to Luis Amaro, president of the Board of Directors of Hospital Garcia de Orta in the metropolitan region of Lisbon.
The hospital also identified possible contacts of risk among health professionals who treated the infected, as well as exposed risk patients and caregivers.
Portugal has registered 1,147,249 cases of infection and 18,441 deaths from COVID-19 since the start of the pandemic, according to data from the Health Directorate. Enditem